Wargays: Man City Oo Doonaysa In Aguero ay Ku Badalato Weerar Yahanka Barca Sanchez
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in kooxda Man City ay doonayso laacibka ree Chile ee Sanchez wararka ayaa intaa ku daraya in kooxdaan ay xiisaynayso inay ku bada shaan weerar yahan kooda Aguero.
Sports Direct News ayaa sheegay in kooxda ree ingiriis ay doo nayso weerar yahanka kooxda Barcelona iyo qaranka Chile inay lasoo wareegaan bisha janaayo iyadoo uu doonaayo macalinka ay isku wadanka yihiin ee Manuel Pellegrini marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaar tooyda bisha janaayo.
Wargays kaan kasoo baxa ingiriiska ayaa intaa ku daray in kooxda City ay doonayso in iyaga iyo Barcelona ay isku badashaan labadaan weerar yahan iyadoo Sanchez uu ku biiraayo Man City halka Aguero uu ku biiraayo Barcelona, lakiin lama oga jawaabta ay ka bixin doonto kooxda ree Spain ee Barcelona xiisahaan ka imaanaya kooxda Man City.
Kooxda Juventus Oo Doonaysa Daafaca Kooxda Real Madrid Sergio Ramos
Kooxda Juventus ayaa bilowday inay xiriir lasamayso daafaca kooxda Real Madrid Sergio Ramos si ay ugu qan ciyaan inuu ku soo biiro kooxda horyaalka talyaaniga.
Sida uu soo tabinaayo Tutto Mercatto kooxda Juventus ayaa baadi goobaysa daafac bir ah waxayna u arkeen Ramos inuu yahay mid ku haboon iyaga.
Ramos ayaa ku jira waqti xun kadib markii la shaaciyay inay isku dhaceen tababaraha iyo madax waynaha kooxda, Juventus ayaana doonaysa inay ka faa idaysato qilaaf kaas oo ay laacibkaan ku qanciso inuu ku soo biiro kooxdooda.
Wargaysku ku ma uusan darin in Juventus ay laacibkaan doonayso janaayo iyo in xiisaha kooxda ree talyaani uu yahay xaggaaga.
waxaa xusid mudan in Ramos iyo kooxda Real Madrid ay beeniyeen labaduba inuu katagaayo kooxda lakiin kooxda Juventus ayaa aaminsan in laacibkaan ay heli karaan.
Frank Bilaal Ribery: Uma Baahni In Taageera Yaasha Ay Xirtaan Wajigayga Sida Ronaldo Oo Kale
Laacibka kooxda Bayern Munich Frank Ribery ayaa sheegay inuu garanaayo booska uu kajoogo taageera yaasha kooxdiisa aysana u bahneen inay sameeyaan wixii ay usameeyeen taageera Real Madrid laacib kooda Cristiano Ronarldo.
45 kun oo taageerayaal Real Madrid ah ayaa xirtay kulankii Champions League ee ay la ciyaareen kooxda Galatasaray masgaro kasamaysan wajiga Ronaldo iyagoo ku taageeraayay laacib kooda dhaawaca uga maqan kooxda.
Ribery oo u hadlay mid ka mid ah wargaysyada kasoo baxa jarmalka ayaa yiri” waxay aheed ban dhig fiican oo taageerayaasha kooxda Real Madrid ay usameeyeen Ronaldo, dhab ahaantii wan ku faraxsanahay in loo sameeyo sidaas, lakiin taageera nimada dhanka qalbiga ee ka imaanaysa dhanka taageera yaasha Bayern Munich ayaa ka fiican in badan.
Ribery ayaa intaa ku daray” si buuxda ayaan u aqaanaa booska aan ka joogo taageera yaasha Bayern Munich, mana u baahna inay taageera nimadooda ku soo muujiyaa wax yaabahaas oo kale, taageera nimada ay ii haayaan waxay soo ban dhigaan maalinba maalinta kadan baysa waana ogahay midaas. ayuu kusoo koobay hadal kiisa laacib kaan u sharaxan xidiga adduunka2013.
Pep Guardiola: Barcelona Xitaa Waxaa Ku Dhex JirayJaajuus
Tababarihii hore ee Barcelona Pep Guardiola ayaa sheegay inuu doonaayo in lasoo af jaro arinta jaajuuskii uu sheegay inuu kooxdiisa ku dhex jiro isagoo sheegay in arintaan aysan ahayn markii ugu horaysay ee uu la kulmo.
Guardiola oo lahadlay warbaahinta ayaa yiri” ma ahaysto waqti aan ku ogaado laacibka uu ahaa ama qofka uu ahaa ee gudbiyay shaxdeena, waxaan isku dayi doonaa inaan ku qanciyo ciyaar tooyda inaysan bixin shaxda kooxda kahor kulanka taasna waa mid u wanaagsan dhamaanteen, waxaa aan is dhahno dhexdeena waa inay inaga nagu koob naadaan.
Pep ayaa kudaray” jaajuus? ma ahan markii iigu horaysay ee aan lakulmo midaan oo kale, kooxdaydii hore [ Barcelona] waxaa ku dhex jiray jaajuus, ma ahan mid noo wanaagsan inaga in kooxda naga soo hor jeeda ay ogaato shaxda aan kusoo galeeno iyo qaabka aan u ciyaareeno kahor ciyaarta.
Waxaa xusid mudan in Pep Guardiola uu ugu hanjabay qofkii bixiya shaxda kooxda inuu ka eryi doono naadiga mar kalana uusan ciyaar siin doonin.
Arsenal Oo Doonaysa Laba Laacib Oo U Ciyaarta Kooxda Man United Bisha Janaayo
Waxaa soo baxa warar sheeegaya in kooxda Arsenal ay doo nayso labada laacib ee u ciyaarta kooxda Man United Luis Nani iyo Chicharito marka uu furmo suuqa kala iib siga ciyaartooyda.
Sida aan kasoo xiganay wargayska Ogugu ee kasoo baxa Portugal kooxda Arsenal ayaa u diyaar garoobaysa inay ku dalbato 26 milyan oo Euro bisha janaayo laacibka garabka uga ciyaara Man United ee Luis Nani iyo weerar yahanka ree Mexico Javier Hernandez .
Labadaan laacib ayaa boos kahaysan kooxda tababare Moyes sidaa darteed kooxda Arsenal ayaa u aragta inay yihiin kuwo kuhaboon iyaga.
Waxaa xusid mudan in kooxda Arsenal ay u baahi qabto weerar yahan iyo laacib ka ciyaara garabka, iyagoo ubahan inay ka faa idaystaan labadaan laacib
Zlatan Ibrahimovic: Waa Adag Tahay In La Minguuriyo Goolasheyda Cajiibka Ah.
Zlatan Ibrahimovic ayaa ku kaftamay inaysan jirin weeraryahano isagoo kale ah oo laga sameeyay play station.
Weeraryahanka PSG ayaa ka hadlayay labadii gool ee fantastiga ahaa ee uu dhaliyay sannadkan 2013.
32 jirkaan ayaa ugu yaraan hadalkiisa ku taageeray goolkii ka yaabsaday dad badan oo kubada cagta u dhuunduleela markii uu England ka dhaliyay gool aan caadi aheyn.
“Waxaan dhaliyay goolal badan ay adag tahay in la minguuriyo. Waxaa jira noocyo goolal oo sarre u qaado isbiiritka dadka” ayuu xiddiga reer Sweden u sheegay Le 10 Sport.
“PSG waxaan dhawaan u dhaliyay gool cirib cajiib ah, goolkaas oo kalena ma arkeysid isbuuc kasta. Waa si la mid ah laba lugaaleydii 40 yard aan ka dhaliyay ee England.
“Laakiin i aamin, marka aan dhaliyo goolal sidaas ah waxaan dareemaa wanaag badan. Inta badan goolal sidaas ah waxaad ku dhalineysaa play-station, waxaadna dareenka marka aad rasmi u dhaliso la barbardhigi kartaa midka play-station.
“Daafac haddii loo hadlo, ma qabo in goolal sidaas u cajiib ah aad ku dhalin karto play-station, inkastoo game-ka gacanta uu beryahan noqday mid ka fiican sidii hore.
Arsenal Oo Noqotay Kooxdii Ugu Danbeysay Ee Isha La Raaceysa Messi Yare Ryan Gauld.
Arsene Wenger ayaa ah tababarihii u danbeeyay ee raga indha indheeya xiddigaha soo koraya ee kooxda u dira inay soo daawadaan hantida ugu kulul ee Scotland haatan Ryan Gauld sida ay ku warameyso Daily Mail.
Caawa ayaa Arsenal ay ku biiri doontaa kooxaha Manchester United, Liverpool iyo Everton kuwaasoo iyagana daawan doona 17 jirkaan lagu naaneeso Messi Yare marka uu u ciyaarayo kooxda Dundee United.
Da’ yarkaan ayaa lagu tilmaamaa inuu leeyahay qaab ciyaareed sarre islamarkaana uu Scotland u yahay Messi-gooda, waxaana uu qeyb ka yahay da’ yar badan oo lala meel dhigay xiddiga Barcelona.
Kooxaha Ingariiska ayaana si dhow u eegaya horumarka uu sameynayo xiddigan iyagoo doonaya inay gacanta ku soo dhigaan haddii ay ku arkaan tilmaamihii hore looga bixiyay.
Man United Oo Diyaar U Ah Inay Iska Diido Dalabka Amaah Ee Juventus Ay Ku Dooneyso Nani.
Kooxda Manchester United ayaa diyaar u ah inay iska diido u soo dhawaanshaha cusub ee Juventus ay ku sameyneyso xiddiga garabka ka ciyaara ee aan booska ka heysan Old Trafford Nani.
Kooxda heysata horyaalka Serie A ayaa diyaar u ah inay amaah u soo bandhigto 27 jirkaan, laakiin shabakada Goal.com oo warkaan qortay ayaa fahamsan in Red Devils aysan dooneynin inay xiddiga reer Portugal ku fasaxaan si ku meel gaar ah.
Inkastoo ay hogaanka u hayaan Serie A, macalinka Juve Antonio Conte ayaan ku faraxsaneyn qaab ciyaareedka uu haatan doorbido ee 3-5-2, waxaana uu rajeynayaa inuu si joogta ah ugu bedelo 4-3-3 marka uu soo xerogeliyo weeraryahan garabka midig ka ciyaara.
Iyadoo lala xiriiriyay xiddigaha Parma Jonathan Biabiany iyo kan PSG Jeremy Menez, Goal.com ayaa xaqiijineysa in Bianconeri ay dooneyso inay lix bilood amaah ku qaadato Nani.
Kooxda Turin ka dhisan ayaa diyaar u ah inay bixiso mushaharka uu ciyaaryahanka ka qaato United oo ah 95 kun ginni isbuucii ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo qiyaar loo siinayo inay si joogta ah kula wareegaan bisha June.
United ayaa saxaafada ka hor sheegeysa in Nani uusan iib ka aheyn, laakiin si qarsoon waxaa laga yaabaa in Juventus ay ka dhaadhiciso inay iska iibiso ciyaaryahanka haddii ay miiska u soo saaraan lacag aan laga jeesan karin, laakiin mid amaah ah meesha kuma jirto.
Sergio Ramos Oo Laga Yaabo Inuu Isaga Tago Kooxda Real Madrid.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in tababaraha kooda Real Madrid Carlo Ancelotti uu aad uga caraysan yahay hoos udhaca ku yimid daafa ciisa Sergio Ramos iyadoo kamirooyin hoose ay duubeen Ancelotti oo hadalo kulul kula hadlaya daafacan kadib casaankii uu qaatay kulankii Galatasary.
Sida aan kasoo xiganay El Munda Deportivo xiriirka u dhaxeeya laacibkaan iyo Madaxwayanaha kooxda Florentino Perez oo lagu daray tabbaraha inuu yahay mid aan wanaagsanayn mudo isbuucyo ah lakiin waxay sii xumaatay markii uu calamada casaanka ah qaatay kulankii Champions League ay Arbacadii laciyaareen kooxda Galatasaray.
Ancelottti ayaa aaminsan in Ramos uu iska indha tiro hadalada uu u sheego isagoo sheegay inuu ku yiri ciyaarta kahor iska ilaali qaladaad ad ku gasho weerar yahanada Galatasaray.
Wargayska ayaa ints raaciyay in Ramos uu waqti danbe dalbaday in loo kordhiyo mushaar kiisa lakiin Perez ayaa diiday dalabka laacibkaan taas ayaana keentay in la shaaciyo inay suurto gal tahay inuu isaga tago kooxda.
Arsenal Iyo Tottenham Oo Isku Haysta Laacib U Ciyaara Kooxda Real Betis
Laacibka ree Spain iyo kooxda Real Betis Alvaro Vadillo ayaa noqday mid aad usoo jiita kooxaha waqooyiga London kawada dhisan ee Arsenal iyo Tottenham kadib qaab ciyaareed fiican oo uu ku raaxeey sanaayo laacib kaan.
Tutto Mercatto ayaa xaqiijisay in kooxda Arsenal ay doonayso inay dalab rasmi ah ugudbiso kooxda Real Betis kaas oo ay ku doonayaan laacibkaan garabka ka ciyaara ahna laacib mustaqbal wanaagsan ku leh garoomada yurub.
kooxda Arsenal ayaa isku diyaarinaysay inay kudabato laacibkaan 19 jir ka ah 20 milyan oo Euro, lakiin waxay loolan xoogan kala kulmayaan kooxda ay dariska yihiin ee Tottenham oo iyadana doonaysa inay kadul qaado Arsenal.